Tansaaniya ayaa diidday Burundi oo ku saabsan suuq geynta dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Tansaaniya ayaa diidday Burundi oo ku saabsan suuq geynta dalxiiska
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Burundi news • Wararka Dowladda • Investments • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Tansaaniya iyo Burundi waxay go'aansadeen inay keligood u aadaan dalxiis dalxiis oo dalalkooda ah. Qaar baa leh tani waa musbaar kale oo ku jirta naxashka wadashaqeynta Bariga Afrika.
Heshiisyadii hore ee la saxiixay bilowgii tobanka sano waxay arkeen qaab goboleed loogu suuq geynayo Bariga Afrika oo ah hal meel oo leh meelo soo jiidasho leh taas oo aakhirkii u aragtay Trademark East Africa inay taageerto aasaaska Barnaamijka Dalxiiska Bariga Afrika si loo siiyo daneeyayaasha gobolka iyo kuwa ganacsiga gaarka loo leeyahay. farsamo lagu fadhiisto, horumariyo iyo ajandaha iyo qorshe hawleedka ka dibna loo soo saaro.
Wax yar ka dib si kastaba ha noqotee waxay cadaatay in gaar ahaan Tansaaniya, si qarsoodi ah iyo si muuqata, ay mar labaad biriijka ku dhufatay, mararka qaarna ay xuduud la leedahay carqalad toos ah sida ku xusan jawaab celinta ay ka heleen kaqeybgalayaasha shirarka.
Markay ahayd 2014 fiisaha guud ee Dalxiiska Bariga Afrika ayaa la bilaabay mar labaad ayay ahayd Tansaaniya, oo ku jiidaysa Burundi godka iyaga, kuwaas oo hor istaagay fulinta, ugana tagay 'Isbahaysiga Rabitaanka' ee hoos imanaya mashaariicda Isdhexgalka Wadada Waqooyiga si loo bilaabo Visa saddex geesood ah dalxiisayaasha iyo gaar u sameynta safarka muwaaddiniinta iyo qurbajoogta diiwaangashan iyo degganayaasha oo sahlan.
Tani waxay horseeday in laga safro Ugandha ilaa Kenya iyo Ruwanda oo si aad ah u kordhay waxayna Uganda galisay kaalinta 4-aad ee adduunka iyadoo ah 'alaab-qeybiyaha' booqdayaasha Kenya sanadkii hore.
Mashruuca Dalxiiska Bariga Afrika, oo hadda bur buray markii ay Trademark maalgashatay, iyadoo fulineysa ujeedka Uganda, Kenya iyo Rwanda, si kastaba ha ahaatee waxay ku fashilantay inay si buuxda u keento labada kale ee saaran iyo bixiyeyaasha, iyadoo laga yaabo inay ka daaleen isqabqabsiga joogtada ah iyo horumar la'aanta jirta. mar kasta oo loo baahdo cod loo dhan yahay, wuxuu sameeyaa ugu dambeyn ka fogaanshaha mashruuca, isagoo ka tagaya Bariga Afrika kan ugu saboolsan.
Waxaa laga fahamsan yahay ilo xog ogaal ah in Uganda, Kenya, iyo Rwanda ay ka soo horjeedaan isbedelka heshiiskii 2011 intii lagu gudajiray shirkii Arusha usbuucii la soo dhaafay laakiin ugu danbeyntii wax yar ayey ka qaban kartaa labada wadan ee aan rabin inay ku sii jiraan. Warshadaha dalxiiska ee Burundi, gaar ahaan, waxaa la dhihi karaa waa kuwa ugu dhibka badan horumarkan, iyadoo dalxiiska, tan iyo horumarada siyaasadeed ee qasan ee sanadihii la soo dhaafay, ay hoos u dhacday ku dhowaad gunta iyo dalxiisayaasha, qayb ahaan la'aanta xiriir hawada ku filan iyo qeyb ahaan kuwa ugu qosolka badan caqabadaha fiisaha, waxay si fudud u dhaafeen Burundi waxayna doorbideen dalalka kale.
Iyadoo seddex arrimood iyo laba xaaladood oo guddiga wasiiradda ah ay diidan yihiin in heshiiska la beddelo ayaa Tansaaniya waxay caddeysay inaysan dareensanayn inay ku xiran tahay heshiiskaas ayna aadi doonaan wadadooda, iyagoo sii fogeyn doona wada shaqeynta Bariga Afrika iyo musbaar ay ku jiraan naxashka. fikradda ah in kor loo qaado Bariga Afrika oo ah hal meel oo leh meelo soo jiidasho leh.
Websaydhka hoos ku yaal hadda wuxuu kaliya muujiyaa Uganda, Rwanda, iyo Kenya, oo ah saddex dal oo wali u hoggaansamaya mabaadii'da wadajirka bandhigyada meelaha ganacsiga dalxiiska ugu weyn ayaa muujinaya halka ay hawlwadeennada dalxiisyada iyo wakiillada socdaalku ay uga fududahay in ay ganacsi la yeeshaan saddexda waddan ee is-garab fadhiya .
Alain St Ange wuxuu ka shaqeynayay ganacsiga dalxiiska tan iyo 2009. Waxaa madaxweynaha iyo wasiirka dalxiiska James Michel u magacaabay Agaasimaha Suuqgeynta Seychelles.
Waxaa loo magacaabay Agaasimaha Suuqgeynta Seychelles Madaxweynaha iyo Wasiirka Dalxiiska James Michel. Hal sano kadib
Hal sano oo adeeg ah ka dib, waxaa loo dallacsiiyay jagada agaasimaha guud ee Guddiga Dalxiiska ee Seychelles.
Sannadkii 2012 waxaa la aasaasay Ururka Badbaadada Badweynta Hindiya Vanilla Islands waxaana St Ange loo magacaabay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee ururka.
Isku-shaandheyntii golaha wasiirrada ee 2012, St Ange waxaa loo magacaabay Wasiirka Dalxiiska iyo Dhaqanka oo uu iska casilay 28-kii Diseembar 2016 si uu ugu tartamo jagada Xoghayaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka.
Shirkii UNWTO ee ka dhacay Chengdu ee Shiinaha, qof loo raadinayay “Circuit Speakers” ee dalxiiska iyo horumar waara wuxuu ahaa Alain St.Ange.
St.Ange waa Wasiirkii hore ee Dalxiiska, Duulista Hawada, Dekedaha iyo Badda Seychelles oo ka tagay xafiiska bishii Diseembar ee sanadkii hore si uu ugu tartamo jagada Xoghayaha Guud ee UNWTO. Markii musharaxnimadiisa ama dukumiintiga uu ku taageeray ay dalkiisa ka laabatay maalin un ka hor doorashadii ka dhacday Madrid, Alain St.Ange wuxuu muujiyey weynaantiisa afhayeen markii uu khudbad u jeedinayey shirkii UNWTO ee uu la yeeshay nimco, qiiro, iyo qaab.
Khudbadiisii ​​xambaarsaneyd ayaa la duubay isagoo ah midka khudbadaha ugu calaamadinta wanaagsan ee hay'addan caalamiga ah ee Qaramada Midoobay.
Dalalka Afrika waxay inta badan xusuustaan ​​khudbaddiisii ​​Uganda ee Madasha Dalxiiska ee Bariga Afrika markii uu marti sharafta ka ahaa.
Wasiirkii hore ee Dalxiiska, St.Ange wuxuu ahaa afhayeen joogto ah oo caan ah waxaana inta badan la arki jiray isagoo ka hadlaya madasha iyo shirarka isagoo matalaya dalkiisa. Awoodda uu u leeyahay inuu ka hadlo 'daboolka' mar walba waxaa loo arki jiray karti naadir ah. Wuxuu inta badan sheegay inuu ka hadlo qalbiga.
Seychelles waxaa lagu xusuustaa cinwaan calaamadeyn ah markii uu si rasmi ah u furay jasiiradda Carnaval International de Victoria markii uu ku celceliyay ereyada heesta caanka ah ee John Lennon… Maalin maalmaha ka mid ah ayaad dhammaanteen nagu soo biiri doontaan oo duniduna waxay ahaan doontaa mid midaysan ”. Kooxdii saxaafadda adduunka ee isugu soo ururay Seychelles maalintii waxay ku ordeen ereyada St.Ange oo meel walba cinwaan ka dhigay.
St.Ange ayaa jeediyay khudbaddii ugu muhiimsanayd ee "Shirka Dalxiiska & Ganacsiga Kanada"
Seychelles ayaa tusaale wanaagsan u ah dalxiiska waara. Sidaa darteed maahan wax la yaab leh in la arko Alain St.Ange oo loo raadinayo sidii af -hayeenka wareegga caalamiga ah.
Xubin ka mid ah Shabakada safarka.
Ku Guulaystayaashii Abaalmarinta Dalxiiska Mas'uulka Ka Ah WTM Ayaa Lagu Dhawaaqay
Delta waxay ku dartay in ka badan 100 duullimaad oo cusub oo ka imanaya New York
Safarka badbaadada leh ee COVID-ka ayaa la filayaa inuu ku sii shido safarka baabuurka
FIFA World Cup Qatar: 10 ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ...
Natiijooyinka Jupiter-ka cusub ee NASA Juno Probe
Jarmalku waxay yiraahdeen auf Wiedersehen inuu isku duubo oo is gacan qaado gudaha...
Dalxiiska ee Bayaanka Glasgow ee ku saabsan Isbeddelka Cimilada...
Boqorka Spain oo fariin muhiim ah u diray UNWTO...
Holland America Line ayaa ku soo laabtay ganacsiga
IATO waxay soo dhawaynaysaa dib u bilaabida Duulimaadyada Caalamiga ah...
Dalabka safarka hawada ee caalamiga ah ayaa si dhexdhexaad ah dib ugu soo laabtay...
Dhabar-xanuun hoose oo daba-dheeraaday: Xaqiiqda Cajiibka ah ee Koowaad
Wixii ka dambeeya Zoom: IMEX America waxay samaysay shirar gaar ah oo heersare ah...
Safarka Thanksgiving-ka ee la filayo inuu kordho 20 milyan...
Dhismaha Empire State oo dhan ayaa loo qurxiyey fasaxyada
Maalinta Qaramada Midoobay: Waqtiga loo dabaaldego iyo in la nadiifiyo
Ingiriisku waa soo noqdeen! 16 Duullimaad isbuucii hadda inta u dhaxaysa UK...
Düsseldorf cusub, Birmingham, Helsinki, Liverpool...
Ian Chan oo ka tirsan kooxda Mirror Boy ayaa hadda taageersan Circle
Shirkadda kirada diyaaradaha ee UK Chapman Freeborn ayaa furaysa diyaarad cusub oo...
Caddaynta tallaalka hadda waa qasab in la fuulo VIA Rail...
Koobka Macau GT oo uu kafaalo qaaday Sands China Title